FANANGONAM-BOKATRA AO MAHABO : Velon-taraina ireo mpandraharaha te-hampiasa vola
Mbola mitohy hatrany ny fanamparam-pahefana ataon’ny olom-boafidy sady mpandraharaha iray izay efa voatondrotondro amin’ny fanangonam-bokatra, any Mahabo. 10 octobre 2017
Velon-taraina ireo mpandraharaha te-hampiasa vola ao amin’ny Distrikan’i Mahabo, Faritra Menabe iny ankehitriny.
“Anjakan’olon-tokana ny fanangonam-bokatra any an-toerana ary voabaikon’io olom-boafidy io avokoa ireo solotenam-panjakana any amin’ny Faritra satria efa amam-bolana no nisian’izany”, hoy ny solontenan’ny mpikambana ao amin’ny Vondrona zanak’i Mahabo. Efa maro ny fitarainana noentin’ireo tantsaha na mpandraharaha any amin’iny Faritra Menabe iny manoloana ny gaboraraka tanterahin’ity olona ambony ity. Tsy misy mahazo mivarotra vokatra amin’ny olon-kafa ireo tantsaha raha tsy amin’io olona manjaka tokana io ihany.
Na ny olona avy ivelan’i Mahabo dia tsy mahazo mividy vokatra ao an-toerana. Teritery no mahazo ireo mpamokatra ary izy io ihany koa no manombana ny vidin’entana. “Fanararaotana ho an’ireo tantsaha no ataon’io olom-boafidy io”, hoy ihany ny solontenan’ny mpikambana avy amin’ny zanak’i Mahabo ity. Ny fiaraha-mientana ijerena ny fandrosoana ifotony amin’ny lafiny rehetra no takian’ny Fikambanana. Tsy vao sambany no nisy fitarainana tahaka izao manoloana ny fanjakana tokana ataon’io olom-boafidy ao Mahabo io ary mbola tsy misy ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana mahakasika izany hatramin’izao.
Fantatra fa nisehoana disadisa niafara tamin’ny fifamonoana tany an-toerana noho ity raharaha ity. Tsy ao amin’ny Distrikan’i Mahabo ihany no manampatra fahefany io olom-boafidy voatondrotondro io fa voafehiny avokoa ny Faritra Menabe manontolo. Faritra mamokatra tokoa i Menabe ary ireo vokatra rehetra misy any an-toerana dia ahoron’izy io avokoa.